Jooraa - Godaantota Afrikaa Mul’achuu Dhaban
Ebla 22, 2016
Gareen lammiiwwan Afriikaa uffee Sahaaraa gadii 104 ta’anii fi bidiruu laastikaan deemaa turan andaara galanaa Liibiyaa irraa fageenya kiiloo meetra 25 irraa jiran baraaramuuf eegaa jiru. (Rooyters)
Awrooppaan baqqatoota lakkofsaan himuun nama dhibuuf buufata ta’un fi seenaan warra Siiriyaa, Iraaqii fi Afgaanistaan irraa waraana baqatanii godaananii midiyaa irratti oduu ijoo ta’uun ittuma fufeera.
Jireenyi fi haalli baqqattoonni Afrikaa, keesumattuu kan gamoojjii Sahaaraa irraa hamminaa jireenyaa fi jeequmsaa naanicha waliin dhahu jalaa baqatanii garuu oggaa imaala hammaataa kana giduutti yoo wayi ta’e malee dhageettii adunyaa argachuu hin dandeenye.
Bara 2015 qofa, lammiilee afrikaa gara 130,000-itti tilmaammamutuu imala baqaa seene. Baqattoota kana keessa bayyen isaanii iyyummaa fi gadadoo hidda gadi fageeffatee jireenya guyya guyyaatii gufuu ta’e kan qaamonni tokko tokko “bu’aa haftee Koloniiti” jedhantu sababa. Haala kana baqataan Gaambiyaa dhaa bahee amma Room jiru mucaan woggaa 16, Moorroo Saaneh, sirritti ibsee: “ gabaabummatt, akka namaatti jiraachuu barbaanna,” jedhe.
Jooraa - Godaantota Afrikaa Mul’achuu Dhaban caalaa natti agarsiisi >>
Gamtaan Awrooppaa Koolu galtoonni dirqisiisamanii biyyatti hin deebifaman jedhe!
Biyyoonni miseensa gamtaa Awrooppaa baqattoota kuma 160tti tilmaaman qubsiisuuf walii galan.
Godaantoota Itiyoopiyaa fi Balaa Konkolaataa Isaan Mudate
Godaantonni giddu galeessa bahaa Awrooppaa seenuuf jiran poolisiin ofi irra deebisaman
Awrooppaan godaantota gara isheetti baqataniif garaa akka laaftu tokkummaan mootummootaa gaafate
Sochii Godaantotaa gara Awrooppaa fi dhimma kana irratti marii Gamtaa Awrooppaa
Waardiyaan Andaara Galaana Xaaliyaanii Godaantota Balaa Doonii Irraa Hafan Oggaa Baraarsuu
Taanzaaniyan Godaantota Itiyoophiyaa 83 Seeraan Ala Biyyattii Seenan Hidhaa Waggaa sadi'ii Itti Murteessite
Godaantonni Dhibbaan Lakkaawaman Garba Meditraaniyaan Keessatti Dhuman
Balaa Doonii Godaantota 500 Galaafaterraa Namni Lubbun Hafe Maal Jedha?